Etu ị ga-esi mepụta kalenda mgbasa ozi mgbasa ozi | Martech Zone
Etu ị ga-esi mepụta Kalinda Mgbasa Ozi Mgbasa
Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 2, 2015 Satọde, Ọgọstụ 1, 2015 Douglas Karr
74% nke ndị ahịa hụrụ otu abawanye na okporo ụzọ mgbe ọ nọrọ naanị awa 6 kwa izu na mgbasa ozi mmekọrịta na 78% nke ndị ahịa America kwuru na mgbasa ozi mmekọrịta na-emetụta mkpebi ịzụta ha. Dabere na Quicksprout, ịmepụta kalenda mgbasa ozi ọha na eze ga-enyere aka ilekwasị anya na usoro mgbasa ozi gị, kesaa ihe onwunwe nke ọma, nyere gị aka bipụta oge niile, ma hazie ụzọ ị si edozi ma mepụta ọdịnaya.
Kalenda mgbasa ozi mmekọrịta gị nwere ike inyere gị aka ịkwalite ọdịnaya dị elu, belata oge ị na-efu, ma hazie ma dozie ọdịnaya. Hụ ihe omuma nke Quicksprout, Ihe kpatara I choro Kalenda Social Media na otu esi eke otu, maka nkọwa zuru ezu banyere ihe kpatara ị ji chọọ kalenda mgbasa ozi na usoro iji mee otu.
Anyị bụ ndị nnukwu Fans nkeHootsuite na ike ịhazi mmelite mmekọrịta site na nnukwu bulite ma lelee mgbasa ozi mgbasa ozi anyị site na echiche kalenda ha:
Ị nwere ike ibudata ndebanye ndebiri kalenda mgbasa ozi mmekọrịta na ndebiri ndebiri si naHootsuite blọọgụ. Anyị na-akwado mgbasa ozi mgbasa ozi ọhaneze ọ bụla gụnyere ihe ndị a:
onye - Kedu akaụntụ ma ọ bụ akaụntụ onwe onye nwere ọrụ maka ibipụta mmelite mmekọrịta mmadụ na onye ga-ahụ maka ịzaghachi arịrịọ ọ bụla?
Kedu - Kedu ihe ị ga - ede ma ọ bụ kesaa? Cheta na onyonyo na vidiyo ga-agbakwunye na njikọ aka na ịkekọrịta. You nyochaa hashtags iji tinye iji hụ na ị rutere ndị na-ege ntị, ndị dị mkpa karị?
ebe - Ebee ka ị na -ekesa mmelite ahụ na kedu ka ị ga - esi melite mmelite maka ọwa ị na-ebipụta?
Mgbe ole - Olee mgbe ị ga-emelite? N'ihi na ihe omume chụpụrụ posts, ị na-agụta ala oge na-aga na ihe omume? Maka mmelite ndị bụ isi, ị na-eme mmelite ahụ ka ndị na-ege gị ntị wee hụ ya ma ọ bụrụ na ha echefu mmelite ndị mbụ? You nwere mmemme cyclical dị ka ụbọchị ezumike ma ọ bụ ọgbakọ ebe ịkwesịrị ibipụta tupu, n'oge na mgbe emechara?
Gịnị mere - agbaghara mgbe ụfọdụ, gịnị kpatara ị na-eziga mmelite mmekọrịta a? Ijide n'aka na ị na-eche ihe kpatara ga - enyere gị aka icheta ọkpụkpọ oku ị chọrọ ka onye ofufe ma ọ bụ onye na - eso ụzọ were yana otu ị ga-esi tụọ uru nke mbipụta ọhaneze.
Kedu - ọzọ isi atụmatụ na Agbaghara… kedu ka ị ga-esi kwalite mmelite? Have nwere mmemme nkwado maka ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa ịkekọrịta? Have nwere mmefu ego iji kpọsaa post ahụ na ọwa mmekọrịta ebe ana-azakarị mmelite mmekọrịta (dị ka Facebook)?
Tags: kalendanchịkọta akụkọkalenda mmadụkalenda mgbasa ozikalenda mgbasa ozi mgbasa ozi
Vidio 7 Should Kwesịrị Promịpụta iji Nwee Nsonaazụ Ahịa
UpSnap: Mobile dị ọnụ, Obodo, na Mgbasa Ozi ezubere iche
Aug 5, 2015 na 8: 43 AM
Nnukwu post! Amalitere m iji Twitter n'oge na-adịbeghị anya, yabụ m ga-eche maka ụfọdụ ndụmọdụ ndị a iji nyere aka kwalite blọọgụ m! Daalụ.